यस्तो रहस्यमय झरना जसको तल सधैँ बलिरहन्छ आगो !! - Kavre Online
यस्तो रहस्यमय झरना जसको तल सधैँ बलिरहन्छ आगो !!
संसारमा कतिपय रहस्य हुन्छन् जसले मानिसहरुलाई सोच्न बाध्य बनाउछन् । यस्तै एउटा रहस्यमय ढुङ्गा छ, त्यहाँ लागातार झरना बगिरहन्छ तैपनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ । यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ । जसलाई आजभोली एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आगो बलिरहन्छ । स्थानियहरुले यसलाई दैविय चमत्कार मान्छन् । यसलाई लिएर धेरै कहानी पनि प्रसिद्ध भएका छन् ।
अचम्मको कुरा यो आगो उतिखेर निभ्ने छ जब धर्तिमा महाप्रलय जस्तो केही आपत आउँछ । यो आगोलाई हेर्न मानिसहरु टाढा टाढाबाट आउने गर्छन् । यो आगोको बारेमा भारतको एउटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक अनुसन्धान पनि गरेको छ । खोजपछि वैज्ञानिकहरुले ढुङ्गाको भित्रिबाट मिथेन ग्यास निस्कने दावी गरेका छन् । यस्तो मानिएको छ कि २० औं शताब्दिको सुरुमा नै यहाँ कसैले आगो लगाएको थियो ।
Prevसन्नी लियोनी भोलि नेपाल आउँदै
Nextदुनियाकै लामो कपाल भएको गाउँ, जहाँ महिलाको कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् हजारौँ पर्यटक
बैंक ह्याक गर्ने चिनियाँ समूहका थप ४ जना पक्राउ
रवि लामिछानेको समर्थनमा छातीमा २४ ठाउँ पोले : रविका लागि गाए मार्मिक गीत (भिडियो)